Uyenza njani i-denim texture kwi-Photoshop: landela la manyathelo alula | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 25/05/2022 17:00 | Izixhobo zoYilo, Photoshop
Ukuthungwa yenye yezinto ezihlala ziyinxalenye yoyilo oluhle. Abancedi kuphela ukuhlobisa okanye ukuguqula uyilo lube yinto emnandi ngakumbi, kodwa bazalisekisa imisebenzi eyahlukeneyo. Kwaye akukhona ukuba kunzima ukwenza okanye ukuyila, kuba ngoku, sinamawaka kunye namawaka eenkqubo ezisinceda siqhubele phambili uyilo lwakho ngokukhawuleza nalula.
Kule posi, sikuzisela enye into yokuyila okanye ubugcisa onokuthi uziqhelanise kwaye usebenzise kuyilo lwakho., kuba siza kuchaza indlela yokwenza i-denim texture kwi-Photoshop, kanye njengoko siyibona kwiimpahla zethu okanye kwiivenkile esizityelelayo.
Kukuthungwa okutsala umdla, ngenxa yento eyenziwe ngayo, kuba yinto engaqhelekanga kakhulu kwihlabathi lefashoni. Kwaye ekubeni asifuni kukwenza ukuba ulinde kwakhona, ngoko Siza kuphawula malunga nemiba ethile okanye iimpawu ezine-Photoshop, inkqubo eye yaba li-10 eliphezulu kuluhlu lweyona graphic design ingcono okanye iinkqubo zokucofa umfanekiso.
1 Photoshop: iingenelo kunye nokungonakali
1.1 Izinto eziluncedo kwiPhotoshop
1.1.1 Imisebenzi ebalulekileyo
1.1.3 uphuhliso kunye nohlaziyo
1.2 Ukungalungi kwePhotoshop
2 Isifundo: Uyila njani iDenim Texture kwiPhotoshop
2.1 Inyathelo 1: Yenza uxwebhu olutsha
2.2 Inyathelo 2: Lungiselela iifestile
2.3 Inyathelo 3: Yenza umaleko omtsha
2.4 Inyathelo 4: Yenza iiSeams
2.5 Inyathelo lesi-5: Faka isicelo sokunxiba kwaye Ugqibile
Photoshop: iingenelo kunye nokungonakali
Umthombo: kwiRadio Sucre
I-Photoshop yinkqubo eyinxalenye ye-Adobe, kwaye izalisekisa owona msebenzi uphambili wokuchukumisa okanye ukuhlela imifanekiso. Yinkqubo ehambelana nelayisenisi okanye umrhumo, kuba yabelana ngendawo kunye nezinye iinkqubo ezifana ne-Illustrator okanye i-InDesign, apho imisebenzi yayo ihambelana noyilo lwegraphic.
Yinkqubo ekulula ukuyisebenzisa kwaye inezixhobo ezithile eziya kukunceda wenze uyilo lwakho ngokukhawuleza nalula. I-Photoshop okwangoku yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu ngamawaka kunye namawakawaka abafoti kunye nabayili. Ke ngoko, kufuneka kuqatshelwe ukuba inesifundo esisisiseko apho iya kukukhokela kuyo yonke i-interface yayo, ngenjongo yokwenza kube lula kangangoko ukuba uhambe ngenkqubo.
Izinto eziluncedo kwiPhotoshop
Sisixhobo iluncedo kakhulu ukuhlela okanye ukuchukumisa imifanekiso. Unokwenza iifotomontages okanye iikholaji, apho unokusebenzisa eyona nxalenye yobugcisa kunye noyilo loyilo.
Kwinkqubo, njengoko sele sichazile, ihlawulwa, kodwa iqulethe ulingo lwasimahla ukuya kutsho kwinyanga enye apho ungajonga khona kwaye uyila ngazo zonke izixhobo ezikhoyo kuwe.
Ayinako kuphela ukukwazi ukuphinda uthintele, kodwa Ikwanayo nenxalenye yonxibelelwano, apho ungayila kwaye wenze iintetho okanye iiGIFS. Emva koko, inkqubo ngokwayo ikuvumela ukuba ukhuphele ngaphandle olu luyilo kwifomethi yeMP4, enye indlela ethanda kakhulu ukusebenza kwayo.
Yinkqubo ethi iyafumaneka nakweyiphi na inkqubo yokusebenza, nokuba usebenzisa iWindows okanye i-IOS, unokuyila ngaphandle kwengxaki. Ukongeza, inkqubo ngokwayo yenze uthotho lwezicelo zeselfowuni, apho ungasebenzisa i-Photoshop kwisixhobo sakho kwaye ngaloo ndlela uthinte umfanekiso.
Ujongano oluphuhlisayo lukhululekile, ke awuzukuba nayo nayiphi na ingxaki yokuyijonga, kwelinye icala uneeleya, eziyindawo apho indawo nganye yoyilo lwakho ibekwe khona nalapho unokuziodola ngokwendlela yokusebenza kwakho, ungade uzibize ngamagama. kwaye ubenzele iziqulathi zeefayili. Kwelinye icala, unebar ephezulu enolunye ukhetho olungakumbi, olunxulumene nomfanekiso, ukuthunyelwa ngaphandle koyilo lwakho, umbala okanye uhlengahlengiso lobungakanani bomfanekiso wakho, njl.
uphuhliso kunye nohlaziyo
Yinkqubo ethi, ekuhambeni kwexesha, iphuhlise uhlaziyo oluninzi kunye neenguqulelo ezintsha, yiyo loo nto ithathwa njengeprogram enobuninzi betekhnoloji yangoku, kwaye apho ungasebenzisa khona izixhobo ezahlukeneyo. NgePhotoshop awuyi kuba nangxaki yokufuna ukwenza izinto ezintsha okanye ukuziqulunqa.
Photoshop Ikwanikezelwa kuyilo lweemockups, ukuze sikwazi ukusebenza kwaye siyilwe olu hlobo loyilo, ngokusebenzisa izinto ezikrelekrele. Ngamanye amazwi, inezinye izixhobo ezisivumela ukuba sivule iingcango ezintsha, kwaye esinokuphanda ngazo kwaye sisebenze ngendlela ebanzi kakhulu. Ngoko ke kubalulekile ukuba xa uthe wayiqonda ngakumbi, yiya phambili.
Photoshop ihlawulwe kwaye une ukuya kwinyanga ukuzama simahla okanye kunye noguqulelo trial, kodwa ukuza kuthi ga ngoku, sI-e ibonakalise ukuba yenye yeenkqubo ezixabisa kakhulu kwimarike. Nangona kuyinyani ukuba imali eninzi idla ngokutyalwa kule nkqubo kuba yeyona ifanelekileyo kwaye ifanelekileyo ukuyilwa, ke abasebenzisi bangaze bayikhuphe, kwaye uyakuhlala uyibona ifakwe kuso nasiphi na isixhobo, kwakudala ngaphambi kokuba ezinye iinkqubo ezinxulumene nayo. Ukubuyisela ifoto kunye nokuhlelwa, yinkqubo eyodwa.
Nangona besichazile ngaphambili ukuba yinkqubo ekulula ukuyisebenzisa, kufuna ulwazi oluthile lwangaphambili Ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ukuba ukuba uza kusebenzisa le nkqubo okokuqala, uqale uzazise kwezinye izifundo malunga nale nkqubo kunye nemisebenzi yayo eyahlukeneyo, ukususela ekuqaleni kokujonga kumntu ongazi ngokupheleleyo le nkqubo. , kusenokubonakala ngathi lilizwe elahluke ngokupheleleyo kwaye kunzima kakhulu ukuliphatha. Kuyo, Sicebisa ukuba undwendwele izifundo zevidiyo zikaYouTube okanye ukuba ungumfundi, phanda iincwadi ezilula ukwazisa ngokupheleleyo kudweliso lwenkqubo kancinci kancinci.
Yinkqubo ethi ihlala ihlaziya, kwaye izihlaziya, ngoko ke, ngalo lonke ixesha usebenzisa le nkqubo kunokubakho into eyahlukileyo kujongano lwayo okanye kwindlela esebenza ngayo. Ngamanye amaxesha abasebenzisi bayavumelana nohlaziyo olunjalo, kodwa ngelishwa kukho amanye amaxesha xa oku akunjalo. Into ebalulekileyo kukuba into nganye onayo ihlala ikwindawo enye njengamaxesha onke, kodwa eminye imiba inokutshintsha eyichaphazela ngeendlela ezahlukeneyo.
Yinkqubo ethi ithatha indawo enkulu kwikhompyuter yethu, Ngoko ke, eyona icetyiswayo yileyo sebenzisa isixhobo esinogcino olukhulu, ekubeni amaxesha amaninzi sisebenza ngemifanekiso okanye izinto ezinobunzima obuninzi kwaye asiyiqondi de siqaphele ekusebenzeni kwePC.
Isifundo: Uyila njani iDenim Texture kwiPhotoshop
Inyathelo 1: Yenza uxwebhu olutsha
Into yokuqala esiza kuyenza kukwenza uxwebhu olutsha, oku, siya kusebenzisa imilinganiselo ye-30 x 30 cm, Siya kushiya isisombululo kwi-150 dpi, siya kulungelelanisa iphrofayili yombala kwaye siyilungelelanise kwi-RGB (siya kusebenza kuphela kwisikrini) kwiibhithi ze-8 kwaye imvelaphi yetafile yethu yomsebenzi iya kuba mhlophe.
Nje ukuba sizilungelelanise ezo parameters, into elandelayo esiya kuyenza kukudala umaleko omtsha, siya kuwugcwalisa lo malekoipesenti ejikeleza phakathi kwama-50 kunye nama-60% engwevu, Sifezekisa oku ukuba sicinezela izitshixo ze-Shift + Del, ngale ndlela siya kuboniswa ifestile esifuna ukuyifumana, apho kulo mzekelo, iya kuba nguye oza kugcwalisa.
Inyathelo 2: Lungiselela iifestile
Njengoko siye saphawula ngaphezulu komxholo uya kuba yi-50% engwevu kwaye imowudi yokudibanisa iya kusetwa ku a imowudi eqhelekileyo nge-opacity kwi-100%.
Okulandelayo, siya kusebenzisa oko kuya kuba zizihluzo zokuqala zabo bonke abazayo. Ukwenza oku, siya kwibar ephezulu ye-interface, kwaye ukhethe ukhetho lomfanekiso kunye emva koko siye ku igalari yokucoca.
Xa sifikelele, kufuneka sikhethe imodeli ukhetho iiseminos kukhetho olunikwe igama njenge Sketch.
Sakuba sifumene oku ngasentla, siya kuhluzo, emva pixelate kwaye ekugqibeleni Kurekhodwe.
Nje ukuba kwenziwe inkqubo yangaphambili, kuya kufuneka siphindaphinde kuphela umaleko, ngenxa yoku, siya kuwujikezisa kwaye silinganise ukuba kuya kuba yintoni umaleko ongaphezulu.
Ukuba sele sele silungele iileyile, sisebenzisa isihlungi, kwaye Siza kuyifiphalisa naye Indlela yeGaussian. Siza kusebenzisa imowudi yodibaniso ebizwa ngokuba phinda-phinda kumaleko woku-1, kwaye emva koko sisebenzise ukukhanya okuthambileyo kuyo.
Inyathelo 3: Yenza umaleko omtsha
Kwinqanaba elilandelayo, siya kudala umaleko omtsha kunye ngesixhobo se-lasso, siya kukhetha kumfanekiso oqulethe imilo.
Kuya kufuneka sigcwalise olu khetho kamva ngepesenti yengwevu leyo thatha 50%Ukongeza, kamva, siya kusebenzisa ukukhanya okunamandla.
Nje ukuba sinala manyathelo, siya kuwenza umthunzi kwaye senze uhlobo lwesithunzi sokulahla ngaphandle. Xa sele senze isithunzi, Okulandelayo, siya kufaka isicelo i-bevel kunye nesiqabu.
Inyathelo 4: Yenza iiSeams
Ukudala imithungo siza kusebenzisa eyona brashi sinayo. Siza kudala umaleko omtsha y kunye isixhobo sokubhala, siya kutsala oko kuya kuba yindlela yomthungo.
Sakuba siyigqibile indlela, siya kusebenzisa umthunzi olula, njengomfana o-beige.
Inyathelo lesi-5: Faka isicelo sokunxiba kwaye Ugqibile
Ukufaka isicelo sokuqhawula, Siya kukhetha umaleko 1 kwaye sisebenzise a ukuboniswa kakhulu kwaye ke siya kusebenzisa into enokuba yileyibhile yeebhulukhwe.
Kwileyibhile kufuneka sifumane imvelaphi kwi-intanethi, sigqithise umfanekiso ngePhotoshop kunye yiguqulele kwiPNG.
Nje ukuba sibe nePNG, kufuneka nje siwusebenzise kuthungelwano lwethu ukuze ibeyinyani ngokusemandleni kwaye yiyo loo nto, sele unokwakheka kwedenim yakho eyilelwe kwaye ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyenza njani iDenim Texture kwiPhotoshop